नाम मिल्दा अनाहकमा पाँच महिना जेल
काठमाडौं । फरार अभियुक्तसँग नाम र ठेगाना मिलेकै भारमा अनाहकमा एक निर्दोष व्यक्ति पाँच महिना १९ दिन जेल जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने यो घटना सप्तरी जिल्ला..
यसरी ढाँटे देउवाले, देउवा बोलेनन्, फोटो बोल्यो !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बेला कुनै तिब्वती शरणार्थी नेतासँग आफ्नो भेटघाट नभएको दाबी गरेको २४ घण्टा नबित्दै विब्वती नेतासँगै बसेको उनको..
तीनपटकसम्म लगातार लाइसेन्सको ट्रायल दिन पाइने
काठमाडौं । सवारीचालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा फेल भए अब तीन महिना कुर्न नपर्ने भएको छ । एकपटक लिखित परीक्षा पास गरेपछि तीनपटकसम्म लगातार ट्रायल परीक्षा दिन पाइने भएको..
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको भारु व्यवस्थापनका लागि भारतसमक्ष अनुरोध..
भारतमै भारतीय एक हजार र पाँच सयका नोट प्रतिबन्ध
काठमाडौं । भारत सरकारले एक हजार र पाँच सय रुपैयाँको नोट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलवार यो घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रष्टाचार र कालो..
काठमाडौं । सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका क्रियाकलापप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकी चीनले नेपाल ‘एक चीन नीति’ मा प्रतिवद्ध रहेरनरहेको बारे नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ । केपी शर्मा ओली..
काठमाडौं । नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा चुरोट र रक्सीमा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । एक वर्षमा एकजना नेपालीले स्वास्थ्यका लागि गर्ने खर्चभन्दा धुम्रपान र मद्यपानमा गर्ने खर्च बढी..
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि छानबीन नगरेको स्पष्ट पारेको छ । अख्तियारले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीहरुमा सत्यता नरहेको दाबीसहित भनेको छ,..
काठमाडौं ।पाथीभरा गाविस–४ का लीलाबहादुर राई हुलाकका पूर्वकर्मचारी हुन् । श्रेणीविहीन उनले गत वर्ष मात्र जागिरबाट अवकाश पाएका थिए । केही वर्षयता सपरिवार सदरमुकाम खाँदबारीमै बस्दै आएका उनी गाउँ फर्कने..
झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–१ स्थित चारपानेमा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक विपन्नता भएका परिवारको उपचारका लागि १० करोड रुपैयाँको सङ्कल्प अभियान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ..
​भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा, राष्ट्रपतिले गरिन स्वागत
काठमाडौं । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीे नेपालको तीनदिने राजकीय भ्रमणका लागि बुधबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । राष्ट्रपति..
काठमाडौं । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीनदिने राजकीय भ्रमणका लागि आज दिउँसो नेपाल आउँदै छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति मुखर्जीबाट हुन लागेको राजकीय भ्रणमका लागि सुरक्षासहित आवश्यक सबै..
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओलीले सरकार परिवर्तन भएसँगै देशको तीन महिनाको समय खेर गएको बताएका छन्। एमाले मध्यपुर नगर समन्वय कमिटीले आइतबार बालकुमारीमा आयोजना गरेको शुभकामना..
निलम्बित भए लोकमान, महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा आजै छलफल हुने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै उनी निलम्बनमा परेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र..
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)को निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प छ । सात करोड निर्माण कार्यमा खर्च भइसकेको छ,..
काठमाडौं । भारतले इलामको पशुपतिनगर ४ फाटक र भारतको राङवाङ ग्रामपञ्चायतको बीचमा पर्ने नेपाल–भारत सीमाको दसगजा क्षेत्रमा भव्य गुम्बा निर्माण गर्न सुरु गरेको छ । काठले बनेको पुरानो टासीछङ्लिङ गुम्बा..
काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सांसदहरूको..
नक्कली साँचो बनाई १० वटा गाडी लैजाने व्यक्ति पक्राउ
भक्तपुर । विगत चार महिनादेखि पार्किङ गरिरहेका विभिन्न सवारी साधनको नक्कली साँचो बनाई अन्यत्र लैजाने कार्य गर्दै आएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत असार महिनादेखि नै भक्तपुर नगरपालिका..
होटेलहरूमा खुलेआम ड्रग्स पार्टी, आयोजकले कमाउँछन् आधा करोड
काठमाडौं । दसैँको अष्टमी दिन सर्वसाधारण घरमा फूलपाती भित्राउन व्यस्त थिए । तर, केही युवायुवती काठमाडौंको दक्षिणतर्फको हात्तीवन रिसोर्टतर्फ लागिरहेका थिए । ठूलो संख्याका विदेशी पर्यटक हात्तीवन रिसोर्टमा जम्मा थिए..
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता, सी छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्ने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिबार साँझ भारतको गोवामा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा प्रचण्डले सीलाई नेपाल भ्रमणका लागि विशेष अनुरोध गरेका छन् । चिनियाँ..
काठमाडौं । अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) आज मंगलबार रातिदेखि खुला हुँदैछ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति ९ बजेर ४५ मिनेटदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता खुला हुने जनाएको छ..
को को आए होटल संघ नेपालमा ?
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)को अध्यक्षमा अमरमान शाक्य निर्वाचित भएका छन् । हानको राजधानीमा सम्पन्न ४५औं वार्षिक साधारण सभाले शाक्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । हानको अन्य पदाधिकारीमा..
काठमाडौं । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा। निरञ्जनमान सिंह बस्नेतले भ्रष्टाचारजन्य आफ्नो गलत कामलाई साथ नदिँदा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रजंग शाहलाई आतंककारीको अभियोग लगाएर नेपाल फिर्ता पठाएको..
काठमाडौं । भारतबाट १५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौता अलपत्र परेको छ । सम्झौताको प्रारम्भिक कार्यान्वयन नहुँदै भारतीय पक्षले मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली पक्ष अन्योलमा परेको छ । सन्..
​१० लाख घुससहित वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत समातिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंका शाखा अधिकृत रमेश लामिछानेलाई रु १० लाख घुससहित सोमबार पक्राउ गरेको छ । आयोगको विशेष टोलीले कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा भइ दर्ता..
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिपी बनेपा–बर्दिबास राजमार्गमा १८ सिटभन्दा कम क्षमताका साना सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले गत साउनमा गठन गरेको सात सदस्यीय प्राविधिक..
काठमाडौं । सिन्डिकेट बलमा सडकमा मनपरी गरिरहेका व्यवसायीलाई चुनौती दिँदै सरकारले यातायात क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउने भएको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको समयमा सडकमा एकाधिकार जमाएका व्यवसायीले दसैंको समयमा..
काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि यातायात व्यवसायी थप बस चलाउन तयार भएका छन् । सोमबारदेखि दसैँका लागि पुनः बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार..
दशैंका लागि सामान बोकेर आएका तीन सय कन्टेनर रसुवागढीमा रोकिए
काठमाडौं । दशैंका लागि चीनको केरुङबाट सामान बोकेर आएका तीन सयभन्दा बढी कन्टेनर रसुवागढी नाकामा थन्किएका छन् । स्थानीयका अनुसार कन्टेनर साँघुरो सडकमै राख्दा जोखिम बढेसँगै आवतजावतमा पनि समस्या भएको..
नारायणहिटी संग्रहालयबाट १९ करोड आम्दानी
काठमाडौं । सञ्चालनमा आएदेखि नारायणहिटी संग्रहालयबाट करिब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणका लागि खुला भएको करिब आठ वर्ष अवधिमा २२ लाख २१ हजार ८९२ जना पर्यटकबाट..
Results 1994: You are at page 42 of 67